Amanzi akwariyam amatsha | Ngeentlanzi
Amanzi akwariyam akwariyam
Njengoko sonke sisazi ukuba zikhona Iintlanzi zamanzi zetyuwa kunye nentlanzi yamanzi amnandi. Zombini zinokugcinwa ziphila kwii-aquariums. Kodwa oku kufuneka sazi yonke into ekufuneka ibenayo kuhlobo ngalunye lwe-aquarium. Kule ndawo yonke into oyifunayo kufuneka ube nayo amanzi akwariyam apho iintlanzi zethu zihlala khona ezona meko zilungileyo.
Iingcebiso, izimvo, izinto kunye neenkcukacha, ukuze intlanzi ikonwabele ukuhlala njengendalo, siyazi ukuba ayifani, kodwa ukuba siyayithanda intlanzi, yindlela elungileyo yokuyikhathalela, usazisa ngalo mbandela kunye neempawu okanye izinto ekufuneka sizazi kwaye sinazo ukuze iintlanzi zamanzi amatsha zihlale kuthi amanzi akwariyam.
Asinakulibala ukuba zizinto eziphilayo kwaye kufuneka sizikhathalele.
Ngawaphi amanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums
por IsiJamani sasePortillo yenzayo 2 iminyaka .
Xa kuziwa ekubeni ne-aquarium, nokuba ngamanzi abandayo okanye amanzi ashushu, eyona nto iphambili ...
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamanzi asetyenziselwa ukugcina isixa esikhulu okanye esincinci seentlanzi. Namhlanje sithetha nge ...
Unokuba ne-aquarium kwaye ufuna ukuyigcina icocekile kwaye isempilweni kangangoko ukuze iintlanzi zakho zikwazi ...
Xa sifumana itanki lethu leentlanzi kufuneka sithathele ingqalelo imiba eyahlukeneyo ngaphambi kokuqala ukuyisebenzisa, kuba ezi zilwanyana zifuna ...
Enye yezinto ekufuneka ubenazo kwindawo ekugcinwa kuyo iintlanzi kwiitropiki yindawo yokufudumeza emanzini. Enkosi…
Umboniso we-Aquarium LED
Xa siqala kwihlabathi lee-aquariums kufuneka sithathele ingqalelo ukonga umbane. Iimpawu ze-Aquarium LED ...
Xa uqala ukusebenzisa i-aquarium yethu kufuneka sazi ukuba kukho izinto ezithile ezibalulekileyo. Enye ye…
por IsiJamani sasePortillo yenzayo 3 iminyaka .
Xa singena kwihlabathi lee-aquariums kunyanzelekile ukuba ube ne-aquarium elungileyo esivumela ...
Xa une-aquarium, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba zeziphi izityalo oza kuzibeka zombini ngenxa yobuhle bayo kunye ...
Ezona mpompo zomoya zilungileyo kwi-aquariums
Njengoko sele uyazi, i-aquarium ifuna izinto ezahlukeneyo ukuze zisebenze ngokufanelekileyo kwaye zigcine iintlanzi zethu ...
Eyona aquariums intle
Ngokuqinisekileyo uthanda i-aquariums kungekuphela kukhathalelo lweentlanzi kodwa kwanomtsalane kunye ...
Amaqondo obushushu afanelekileyo kwintlanzi yetropiki yasemanzini
Amazon biotope yeentlobo ezincinci
Amanzi Amanzi Obuxoki Olahla Intlanzi
Ukuqaliswa kokuzonwabisa kwi-aquarium
Ukulungiselela i-aquarium yentlanzi yesikali
Ukuzaliswa kweentlanzi ezivuthayo
Izikhokelo zokukhulisa iintlanzi ze-koi